Vokany 5 manan-danja i Goliata eo amin'ny fiainan'ny mpino | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Vokany 5 manan-danja i Goliata eo amin'ny fiainan'ny mpino
Vokany 5 manan-danja i Goliata eo amin'ny fiainan'ny mpino
Androany isika dia hampianatra ny vokatra 5 lehibe nananan'i Goliath teo amin'ny fiainan'ny mpino. Voalohany, mila manome famaritana mazava ny dikan'ny hoe Goliath isika. Goliath dia tsy goavambe goavambe mampitahotra olona fotsiny araka ny fanazavan'ny Baiboly ny bokin'ny 1 Samoela toko faha-17. Goliath dia tsy fanehoana ara-batana mpampahory fotsiny, fa i Goliath dia hery demonia izay mametra ny fandrosoan'ny iray hafa. Midika izany fa tsy tokony ho lava na goavambe i Goliath vao antsoina hoe Goliath. Raha vantany vao afaka manandevo, mampahantra, na mampijaly olona iray hafa izy ireo dia i Goliath.
Mampalahelo fa mpino maro no manana an'i Goliath amin'ny fiainany ary tsy fantany izany. Na teo aza ny fifandraisan'i Abrahama tamin'Andriamanitra, dia voatery nifanditra tamin'ny demonia momba momba izy. Io kamboty io dia Goliata ka tsy afaka nanan-janaka intsony i Abrahama. Na dia lehibe toa an'i Mosesy aza izy dia tototry ny fanahin'ny fahatezerana. Io fahatezerana io ihany no nanakana azy tsy ho tonga tany amin'ny tany nampanantenaina. Ho an'ny olon-kafa, ny Goliath-n'izy ireo dia mety tsy fahombiazana, mety ho fahantrana, mety ho faty tampoka na zavatra hafa.
Rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra i Daniel, ny valin'ny vavaka nataony dia nampitain'ny anjely iray. ny andrianan'ny Persia nitazona ilay anjely fa tsy afaka nahazo valiny tamin'ny vavak'i Daniel i Daniel. Na izany aza tsy nijanona nivavaka i Daniel raha tsy nisy anjely hafa nirahina hanafaka ilay efa babo mba hahafahany mamaly ny vavak'i Daniel izay novaliany. Goliath dia afaka mijoro ho sakana manohitra ny fahasambarana, ny fahasalamana na ny haren'ny olona.
Goliath tamin'ny fiainan'ireo Isrealita dia mpampahory lehibe. Hivoaka isa-maraina sy hariva izy hihaika ny zanaky Isreal hiady, rehefa hitan'ny lehilahy Isreal rehetra izy dia nandositra teo alohany izy. Natahotra be izy ireo noho ny halavany nampatahotra sy ny endriny henjana.
Indraindray, ny Goliata amin'ny fiainantsika dia afaka miharihary amin'ny lafiny iray izay hahafantarantsika fa ampijaliana na ampahorina isika. Indraindray, izy ireo dia mamoaka mangingina ny adidiny amin'ny fomba an-kolaka izay tsy azontsika akory. Mandritra izany fotoana izany dia tsara ny mahatsikaritra Goliath haingana mba hananganana alitara fivavahana hanohitra azy. Raha te hahalala ianao raha manakorontana ny fiainanao ny fisian'i Goliath dia tandremo ireo famantarana ireo:
Tsy valiana ny vavaka
Iray amin'ireo vokatra lehibe ateraky ny goliata eo amin'ny fiainan'ny mpino ny vavaka tsy voavaly. Mivavaka amin'Andriamanitra isika amin'ny finoana fa misy Izy ary manantena fa mihaino antsika Izy ary mamaly antsika. Toy izany koa i Daniel.
Ny bokin'ny Daniela 10 dia nanazava ny fomba nivavahan'i Daniela tamin'Andriamanitra tamin-kafanam-po. Nandre ny vavak'Andriamanitra avy tany an-danitra izy ary nandefa anjely hamaly ny vavak'izy ireo. Saingy, notoherin'ny andrianan'ny Persia ny anjely nandritra ny 21 andro. Ilay anjely dia nijanona teo amin'ilay toerana nandritra ny androm-piainany, saingy satria nanohy nivavaka i Daniel. Tsy maintsy nirahin'Andriamanitra i Mikaela hanafaka ilay anjely notazon'ny printsin'i Persia.
Mihaino antsika Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Indraindray, ny antony tsy nahazoantsika valim-bavaka dia noho ny fisian'i Goliath iray amin'ny fiainantsika izay mijoro ho sakana. Rehefa mivavaka ianao nefa tsy mahazo valiny dia famantarana izany fa misy Goliata eo amin'ny fiainanao.
Voagejan'ny filàna ara-bola
Ny soratra masina dia milaza fa hanome ahy izay ilaiko araka ny haren'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy Andriamanitra. Tokony hokarakaraina ny filantsika ara-bola. Tsy hoatran'ny mpitory maro no mino anao. Milaza ny Baiboly fa mahita lehilahy mazoto amin'ny asany, hijoro eo anatrehan'ny mpanjaka izy fa tsy olona.
Na izany aza, ho hitanao ny mpino sasany miasa, mamoy ny fiainany sy ny zava-drehetra amin'ny asany, nefa mandany fahantrana. Ity dia mariky ny Goliata. Zava-dehibe ny fahalalana fa i Goliath dia sakana sy mpampijaly mafy. Rehefa miasa ianao ary tsy mahazo ny valin'ny hatsembohanao, dia misy Goliata iray eo amin'ny sary mitsangana eo anelanelanao sy ny fanambinana.
Ny ran'i Kristy dia ampy hanasitranana ny karazan'aretina rehetra. Na izany aza, rehefa tratry ny aretina mahatsiravina izay mitarika ny sain'ny orthopedic rehetra ny fiainanao, izany dia famantarana fa misy Golia iray eo amin'ny fiainanao.
Ny soratra masina milaza ny dian-kapoka aminy dia sitrana isika. Nentin'i Kristy teo aminy ny rofintsika rehetra ary nositraniny ny aretintsika rehetra. Midika izany fa efa ela be talohan'ny nahaterahantsika dia efa nanasitrana antsika i Kristy. Ity dia fanekena maharitra ho antsika, ny Goliath dia afaka manakana ny fanekempihavanana tsy ho tonga amin'ny fahatanterahany.
Rehefa afaka mandresy ny ota ianao
Misy ny olona manota i Goliata. Nampahafantarin'ny Baiboly antsika fa ny sofin'ny Tompo dia tsy mavesatra loatra maheno antsika, fa ny fahotantsika no nahatonga ny fetra teo amintsika sy Andriamanitra.
Ho an'ny mpino sasany dia fahotana ny Goliata. Arakaraky ny andramany hialana amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana no vao milatsaka ao anatiny. Rehefa tsikaritrao fa nitalaho famelana tamin'Andriamanitra tamina fahotana iray manokana ianao, dia fotoana izao hamonoana io mason'ny ota io eo amin'ny fiainanao.
Rehefa raiki-tahotra ianao
Fa Andriamanitra tsy nanome antsika fanahin'ny tahotra, fa ny Fahafatesan'ny Zanakalahy, hitomany Ahba ray.
Natahotra be ny lehilahy Isreal nahita an'i Goliata. Tsy nisy sahy nanohitra azy. Isaky ny mivoaka mirehareha izy dia mandositra ny masony ny lehilahy rehetra ao Isreal. Iray amin'ireo lojika iray an'i Goliath ny fampitahorana ny fiainantsika amin'ny tahotra. Manadino antsika fa natsangana ho zanakavavin'ny famonjena isika.
Indraindray dia mety hatahotra ny tsy hamelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Matahotra izaitsizy tokoa izahay handeha eo anatrehan'ny tompo. Mandritra izany fotoana izany dia milaza ny soratra masina fa tsy manana Mpisoronabe izay tsy azo tohina amin'ny fahatsapana ny fahalementsika isika. Hebrio 4: 15-16 Fa isika tsy manana Mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, nefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po ary mahita fahasoavana manampy amin'ny fotoan-tsarotra.
amin 'ny fanandevozana
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hivavahana alohan'ny handehanana any amin'ny Masoivoho
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny goliata amin'ny fiainako
Vavaka hahazoana fanampiana avy hatrany avy amin'Andriamanitra
VAVAKA FIVAVAHANA HO AN-TOKONY VOLA TSY MISY
Vavaka isan'andro mahomby ho an'ny maso manasitrana
NY BAIBOLY IZAO DIA MOMBA NY FIKAMBANANA VAOVAO